Akụkọ - Ndi n’elu igwe anaghị agba nchara na-ajari?
Gịnị bụ igwe anaghị agba nchara? Na nghọta nke ọtụtụ ndị mmadụ, "igwe anaghị agba nchara" bụ nchara nke na-agaghị ata nchara, mana ọtụtụ ndị ahịa na-emepụta ebe nchara mgbe nchara nchara nchara (ntụpọ) pụtara n'elu valvụ igwe anaghị agba nchara. Gịnị bụ ihe kpatara ya? Igwe anaghị agba nchara valves nwere ikike iguzogide ikuku ọxịdashọn-ya bụ, igwe anaghị, ma na-enwe ike corrode na-ajụ nwere acid, alkali, nnu-ya bụ, corrosion eguzogide. Otú ọ dị, ogo nke ikike mgbochi ya na-agbanwe na ngwongwo kemịkal nke nchara n'onwe ya, ọnọdụ nke ibe ya, ọnọdụ ojiji na ụdị usoro gburugburu ebe obibi. Dị ka ọkpọ ígwè nchara 304, na ikuku akọrọ na ikuku dị ọcha, ọ nwere ikike mgbochi mmebi kpamkpam, mana mgbe a na-akwaga ya n'akụkụ oke osimiri, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-agba nchara n'ọgba mmiri nke nwere ọtụtụ nnu; na 316 ígwè anwụrụ na-egosi ihe ọma. Ya mere, ọ bụghị ụdị igwe anaghị agba nchara, nke na-eguzogide corrosion na nchara na gburugburu ebe obibi ọ bụla.
Ngwongwo igwe anaghị agba nchara dabere na oke ihe nkiri, nke siri ike, nke siri ike ma kwụsie ike na ihe nkiri oxide (ihe nkiri nchedo) nke e guzobere n'elu ya iji gbochie infiltration na oxidation nke oxygen atom iji nọgide na-enweta ikike iguzogide nchara. Ozugbo maka ihe ụfọdụ, a na-ebibi ihe nkiri a mgbe niile, ikuku oxygen dị na ikuku ma ọ bụ mmiri mmiri ga-aga n'ihu na-abanye ma ọ bụ akara amị dị na metal ahụ ga-aga n'ihu na-ekewapụ, na-akpụ oxide oxide, na igwe ahụ ga-agba nchara. Enwere ọtụtụ ụdị mmebi ihe nkiri a,
E nwere ọtụtụ ụdị anaghị agba nchara valvụ na-adịkarị ná ndụ kwa ụbọchị:
1. Elu nke valvụ nchara na-agbakọta ájá ma ọ bụ ihe ọla ndị ọzọ nwere ihe ndị ọzọ. N’ikuku iru mmiri, condensate n’agbata mgbakwunye na igwe anaghị agba nchara na-ejikọ ha abụọ n’ime batrị micro, nke na-ebido mmeghachi omume electrochemistry, ihe nkiri nchedo mebiri emebi, nke akpọrọ electrochemical corrosion.
2. Organic okwu ihe ọ juiceụ juiceụ (dị ka egusi na akwukwo nri, noodle ofe, sputum, wdg) na-agbaso elu nke igwe anaghị agba nchara. Na mmiri na oxygen, ọ na-etolite acid acid, na acid acid ga-emebi elu igwe ruo ogologo oge.
3. Elu nke igwe anaghị agba nchara nwere acid, alkali na nnu (dị ka mmiri alkali na mmiri mmiri na-efesa na mgbidi mma), na-akpata corrosion mpaghara.
4. N’ikuku metọrọ emetọ (dị ka ikuku nwere ọtụtụ sọlfọ, carbon oxides, na nitrogen oxides), mmiri agwakọta ga-abụ sọlfọ sulphic, nitric acid, na ntụ mmiri mmiri acetic acid, na-ebute kemịkalụ kemịkal. Ọnọdụ ndị dị n'elu nwere ike ịkpata mmebi nke igwe anaghị agba nchara na-echebe ihe nkiri ma kpatara nchara.
Ya mere, iji hụ na elu igwe ahụ na-enwu gbaa kpamkpam ma ọ bụghị nchara, anyị na-akwado:
1. A ga-ehicha ma kpochapu elu nke ihe ndozi igwe anaghị agba nchara ma kpochaa ya ugboro ugboro iji wepu mgbakwunye ma kpochapụ ihe ndị dị na mpụga na-akpata mgbanwe.
2. A ga-eji valvụ nchara 316 mee ihe na mpaghara mmiri. Ihe 316 nwere ike iguzogide mmiri nke mmiri.
3. Ngwakọta kemịkal nke ụfọdụ ọkpọkọ igwe anaghị ata nchara na ahịa enweghị ike ị nweta ụkpụrụ mba kwekọrọ, ma enweghị ike ị nweta ihe achọrọ nke ihe 304. Ya mere, ọ ga-emekwa ka nchara nchara, nke chọrọ ka ndị ọrụ jiri nlezianya họrọ ngwaahịa sitere na ndị na-emepụta aha ọma. Ebe a na-ewu ụlọ na ebe a na-ewu ụlọ iji gbochie ọkọ na mmachi nke mmetọ na-emerụ ahụ n'oge a na-ewu ya, a na-ewu valvụ igwe anaghị edozi na steeti ihe nkiri. Otú ọ dị, site na ndọtị nke oge, ihe fọdụrụ nke ngwọta mado dị na oge eji eme ihe nkiri. Mgbe mwepụsịrị ihe nkiri ahụ mgbe emechara ya, a ga-asacha elu ahụ, a ga-ejikwa ngwaọrụ nchara pụrụ iche. Mgbe ị na-ehicha akụrụngwa na-ejikarị igwe nkịtị eme ihe, ọ ga-ehicha ya iji gbochie njigide ígwè nke iron. . E kwesịrị ilebara anya ka ị ghara ikwe ka magnetism na nkume dị oke ọnụ na-ehicha ịkpọtụrụ igwe anaghị agba nchara. Ọ bụrụ na ha na-akpọtụrụ, a ga-asacha ya ozugbo. Mgbe emechara ya, jiri ihe na-anọpụ iche na mmiri na-ehicha ciment, na-efe efe ash, wdg.
Na nchịkọta, igwe anaghị agba nchara valves agaghị kpamkpam nchara-àmà, na ka ga-ajari n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ. Anyị ga-etinyerịrị, lekọta, ma mezie valvụ nchara igwe anaghị edozi anya na ihe achọrọ, ma gbalịa ịchịkwa nchara nchara nke igwe anaghị agba nchara n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ.
Post oge: Mee-02-2020